Ny fomba hahatongavana CCNP Wireless Certified Professional - ITS Tech School
Inona no fanamarinana CCNP Wireless?
Dingana 1: Jereo ny vintana mety hahafahanao mahazo ny mari-pahaizana
Dingana 2: Nahazo ny fanamarinana
Dingana 3: Fanavaozana ny fanamarinana
Cisco dia manome mari-pahaizana momba ny varotra tahaka ny CCNA ary CCNP. Koa satria CCNP dia ambony lavitra noho ny CCNA, dia mitebiteby kokoa izy ary mitaky fampahalalana sy fampiharana hentitra kokoa. Raha misy ny fanamarinana tsy misy tambazotra, dia ampiasaina ny fenitry ny tambajotra tsy miankina sy ny ipothesis amin'ny fametrahana toeram-pambolena ho an'ny matihanina mifanaraka amin'ny filàn'ny tambajotra Wireless. Miaraka amin'ny fianarana dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fanamarinana, afaka mamolavola ny hevitry ny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny asa ny manampahaizana. Omeo fahafahana hahita ny CCNP Wireless certification amin'ny antsipiriany izahay.
Ny Cisco Certified Network Professional Wireless certification dia mifantoka amin'ny fanavaozana tambajotra Wireless amin'ny fampiasana ny Cisco zavatra. Nahafantatra tsara ny 2009 izy ary nieritreritra ny filàn'ny fivoaran-draharaha. Ireo mari-pankasitrahana dia mirakitra ny fitaterana, ny fandrindrana, ny fiarovana ary ny fanadihadiana ny tamba-drafitrasa Wireless an'ny Cisco.
CCNP Wireless dia manaparitaka lohahevitra toy ny fikarakarana ny tranokala, ny fahazoana ny fepetra takian'ny mpanjifa, ny fanatanterahana ireo tambajotra tsy misy tambiny, ny fiarovana ny fototra amam-pitaovan'ny LAN sy ireo toetry ny fanjakana hafa tsy voajanahary. Ireo mpitsabo manana ity fanamarinana ity dia raisina eran'izao tontolo izao ho toy ny nanosika ny fandraisan'anjaran'ny tànana amin'ny gadget Wireless Cisco. Ity no fanamarinana tsara indrindra ho an'ny matihanina mitady fikarakarana tsaratsara kokoa sy karama ambony. Ireto ambany ireto ny fitaovana entina manamarina.
Jereo ihany koa :Fanamarinana CCNA - Guide tanteraka
Ireo tambajotra amin'ny tambajotra Wireless toy ny mpanatontosan'ny tambajotra, ny mpitantana ny tambajotra ary ny manam-pahaizana momba ny tambajotra dia afaka mandray ny fanamarinana mba hanatsarana ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-manaony Ireo olona izay mikaroka ireo toerana ireo dia afaka mifidy izany mba hahazoana rivotra tsara ho an'ny varavarana mifandray amin'ny asa. Voamarina fa hiasa amin'ny 20% eo amin'ny taona 2008 sy 2018 ny asa. Ny tahan'ny fivoaran'ny raharaham-barotra dia miankina amin'ny manodidina 30 ka mahatonga azy io ho tombony ho an'ny matihanina amin'ity sehatra ity. Ny hoavy dia mahita ny tonon-tsokajiny ho an'ny asa izay mitondra ny tari-dalana rehefa mahazo ny mari-pamantarana izy ireo.
Ny olona mila mahazo mari-pahaizana dia tokony hanana CCNA Wireless na CCIE mari-pankasitrahana. Midika izany fa mahazo ny mari-pankasitrahana an-tserasera amin'ny CCNP, izy aloha dia mila mandray ny Cisco Certified Network Associate Wireless na ny Cisco Certified Internetwork Expert fanamarinana amin'ny lalana rehetra.
Misy fanadinana efatra ho an'ny fanamarinana Wireless. Ireo no 642-731 CUWSS, 642-741 IUWVN, 642-746 IUWMS sy 642-736 IAUWS. Ny tsirairay amin'ireo fanadinana dia misy 50 amin'ny adiresy 60 izay tokony ho vita amin'ny iray sy sasany. Ho an'ny fanadinana rehetra dia misy ny fiofanana mandritra ny andro 5. Ireo fiofanana ireo dia manomana ny mpifaninana hametraka tambajotra tsy misy tambazotra, hampiditra singa samihafa toy ny fitantanana ny Voice over Wireless Local Area Network, ny fahombiazan'ny portability ary ny fiarovana ny tambajotra amin'ny loza mety hitranga.
Fanamarinana matihanina tsirairay avy Cisco dia mijanona ho manan-danja mandritra ny telo taona monja. Aorian'io vanim-potoana io, ny fanamarinana dia mihitsoka ary ny mpihazona testamenta dia tsy mahafeno fepetra intsony amin'ny tombontsoa matihanina. Tokony hangataka ny fanamarinana indray izy mba tsy hankasitraka azy ireo. Manana safidy efatra izy mba hijerena. Tokony handalo fanadinana matihanina izy alohan'ny handaminana ny fanamarinana na tokony handalo ny fanadinana CCIE amin'izao fotoana izao. Ny safidy fahatelo dia ny manome ny zo atolotra amin'izao fotoana izao Cisco Certified Design Expert (CCDE) manangana na midina amin'ny fanadinana eto an-tany. Ny safidy farany dia ny handefa ny fivorian'ny birao sy ny filàna fanadihadiana momba ny fanamarinana Cisco Certified Architect (CCAr) izay manamarina azy ho an'ireo mari-pahaizana ambany kokoa.
CCNP Wireless dia mari-pankasitrahana be loatra izay mitaky fa ny mpanolotsaina mandray ny fanadinana dia tokony hanana fototra lehibe ao amin'ny faritany. Tafiditra ao anatin'izany ny fianarana ara-pihetseham-po sy ara-pihetseham-po arak'izay voamarina fa hiasa eo amin'ny sehatry ny tambajotra marina izy ireo. Izany dia hizaha na inona na inona fahaiza-manao ananany amin'ny alàlan'ny fanamarinana.
Jereo ihany koa :Nahoana ny orinasa dia mila manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny adiresy CEH Certified?
Zava-manan-danja tokony ho fantatra momba ny fanamarinana fiantohana CCNP